Soo-saaraha iyo Warshadda bireed ee naxaasta leh ee RA-da ugu Fiican | Civen
Foils Copper oo duuban
Fool -biraha Copper
2L debecsan Copper Clad Lam ...
Cajaladda Copper Copper
Gabbaadyada ED ee naxaasta ah
HTE Copper Electrodeposited ...
ED Copper Foils for Li-ion ...
Sax-sax sare RA-bireed Copper
Faallooyinka naxaasta ah ee la duubay oo sax ah waa qalab tayo sare leh oo ay soo saartay CIVEN METAL. Marka la barbardhigo badeecooyinka bireedka naxaasta ah ee caadiga ah, waxay leedahay daahirnimo sare, dhammaystir wanaagsan oo dusha sare ah, fidnaan fiican, dulqaadyo sax ah iyo sifooyin kaamil ah oo kaamil ah.
Email noo soo dir Weydii Muunad
Faallooyinka naxaasta ah ee la duubay oo sax ah waa qalab tayo sare leh oo ay soo saartay CIVEN METAL. Marka la barbardhigo badeecooyinka bireedka naxaasta ah ee caadiga ah, waxay leedahay daahirnimo sare, dhammaystir wanaagsan oo dusha sare ah, fidnaan fiican, dulqaadyo sax ah iyo sifooyin kaamil ah oo kaamil ah. Xadhigga sare ee naxaasta ah ayaa sidoo kale ahaa degrease iyo anti-oxidized, taas oo u oggolaanaysa bireedku inuu lahaado cimri dheer oo ay fududaato in lagu dhejiyo agabyo kale. Maaddaama alaabta la soo saaray oo lagu soo baakadeeyay qolka boodhka aan lahayn, nadaafadda badeecaddu aad ayay u sarraysaa waxayna buuxinaysaa shuruudaha deegaanka wax-soo-saarka elektiroonigga ee dhammaadka ah. Dhammaan badeecooyinka bireedka naxaasta ah ee si sax ah loo duubay ayaa la kontoroolaa oo lala socdaa iyadoo la raacayo heerarka wax -soo -saarka caalamiga ah ee ugu adag, iyada oo ujeedadu tahay inaan la gaarin cillad. Kaliya ma noqon karto beddelka badeecado isku mid ah oo ka yimid Japan iyo Wadamada Galbeedka, laakiin sidoo kale waxay gaabinaysaa muddada wax soo saarka ee macaamiisheena.
Biraha naxaasku waa alaab ceeriin ah oo aan laga maarmi karin samaynta guddi wareeg oo daabacan (PCB), dahaarka dahaarka leh ee naxaasta ah (CCL) iyo baytariyada lithium-ion. Xadhkaha naxaasta ee warshadaha waxaa loo qaybin karaa bireedka naxaasta ee la duubay iyo bireedka naxaasta ee elektrolytka ah marka loo eego habka wax soo saarkiisa. Fool -kabka naxaasta ah ee elektrolytic -ka ah waxaa lagu sameeyaa naxaas elektrolysis ah oo ku saleysan mabda'a kiimikada. Qaab -dhismeedka gudaha ee bireedka cagaaran waa qaab -dhismeedka kiristaalo irbad toosan, iyo qiimaha wax -soo -saarkiisu aad ayuu u hooseeyaa. Foil -ka -samaysan ee naxaasta ah waxaa la sameeyaa iyada oo la soo rogaal -celinayo hannaanka dib -u -soo -kabashada ee maaddada naxaasta ee ku salaysan mabda'a ka -shaqaynta caagga ah. Qaab dhismeedkeeda gudaha waa qaab -dhismeed kristaliin ah, iyo ductility -ka alaabooyinka bireedka naxaasta ah ee la duubay ayaa wanaagsan. Waqtigan xaadirka ah, bireedka naxaasta ah ee elektrolytka ah ayaa inta badan loo adeegsadaa soo saarista guddiyada wareegga adag, halka bireedka naxaasta ah ee la duubay badiyaa waxaa loo adeegsadaa guddiyada wareegga ee dabacsan oo aad u sarreeya.
● C11000 Copper, Cu> 99.99%
● Baaxadda dhumucda: T 0.009 ~ 0.1 mm (0.0003 ~ 0.004 inch)
● Baaxadda ballaca: W 150 ~ 650.0 mm (5.9 inji ~ 25.6 inji)
Guryaha dabacsan ee sarreeya, lebiska iyo dusha sare ee bireedka naxaasta ah, dheeraynta sare, iska caabin daal oo wanaagsan, iska -caabbinta oksaydhka oo xoog leh iyo sifooyin farsamo oo wanaagsan.
Ku habboon qaybaha sare ee elektiroonigga ah, looxyada wareegga, baytariyada, qalabka gaashaanka, qalabka kala-firdhinta kulaylka iyo qalabka tabinta
Hore: Copper Nickel -bireed
Xiga: RA Coils Foils for FPC
Ra -bireed Copper
HTE Foils Copper Electrodeposited for PCB
ED Copper Foils ee FPC
Copper Nickel -bireed
Nickel Plated -bireed Copper
NickelFoil oo ah Elektrolytic
CIVEN Metal waa shirkad ku takhasustay cilmi-baarista, horumarinta, wax-soo-saarka iyo qaybinta maaddooyinka birta ee dhammaadka ah